Sangano Re Zimbabwe Cricket Rogadzirira Kuvaka Nhandare KuVictoria Falls
Chikumi 01, 2011
Sangano re Zimbabwe Cricket rinoti riri kuronga kuvaka nhandare yekutambira mutambo wekiriketi muguta revictoria Falls muchinguva chipfupi chinotevera kuitira kuti riwane imwe nhandare yechitatu yekutambira mitambo ye test cricket.
Zimbabwe yakamira kutamba mitambo ye test cricket muna 2005 uye iri kutarisira kudzokera mumitambo iyi gore rino risati rapera.
Nhandare itsva iyi ichavakwa pedyo nemapopoma emuguta iri ayo ane mukurumbira pasi rose.
Zimbabwe Cricket inoti yakatonyorera kanzuru yeVictoria Falls ichikumbira mvumo yekuvaka nhandare iyi.
Chief Executive ve Zimbabwe Cricket, va Ozias Bvute, vanoti vari kufadzwa nemavambiro arikuita chirongwa chavo chitsva chekuvaka nhandare kuVictoria Falls sezvo chichaunza mutambo uyu kuvanhu.
Parizvino Zimbabwe ine nhandare mbiri muHarare ne Bulawayo kunotambirwa mitambo mukuru nedzimwe nyika dzekunze saka chido chava Bvute ndechekuti mitambo iyi memakwikwi aya akwanise kupararira kune dzimwe dzvimbo.
Australia ne South Africa varikutarisirwa munyika mwedzi uno uya apo kuchawuya zvikwata zveA team dzenyika idzi uye zvichabatsira mugadziriro yekudzokera kweZimbabwe mimitambo yema Test gore rino risati rapera.
Hurukuro naVaOzias Bvute